Imtixaanada NWEA - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Ardayda Minnetonka ee xanaanada ilaa fasalka 8aad waxay kaqeyb galaan imtixaanada degmada oo dhan horaantii deyrta iyo Maajo kasta. Imtixaanadani waxay cabbirayaan waxa ilmahaagu hore u ogaa ee xisaabta iyo akhriska iyo waxa ilmahaagu weli u baahan yahay inuu barto. Sannad kasta, natiijooyinku waxay ka caawiyaan macallimiinta barista bartilmaameedka heerka waxbarasho ee "xaq-u-siman" ee ilmahaaga. Imtixaanada Maajo waxay qiimeeyaan koritaanka waxbarasho ee canug walba inta lagu jiro sanadka.
Si looga jawaabo su'aalaha, "sidee ayuu ilmahaygu wax u qabtaa marka loo eego filashooyinka darajadiisa ama iyada?" ama, "canuggaygu miyuu ku socdaa inuu helo kobaca sanadka sanadka gudihiisa?" waalidku waxay isbarbar dhigi karaan dhibcaha koritaanka ilmahooda iyo xeerarka qaranka. Fiiri labadaba dhibcaha RIT marka loo eego xeerarka qaranka iyo xeerarka qaranka ee koritaanka afarta jaantus ee hoose.
Dhibcaha NWEA RIT ee Heerarka Fasalka ee Caadooyinka Qaranka
(Celcelis ahaan, ardayda Minnetonka waxay buundooyin badan ka sareeyaan heerarka qaranka.)
Xeerarka Kobcinta NWEA
Ardayda Minnetonka waxay qaataan NWEA deyr kasta iyo guga. Isbarbar dhig koritaanka ilmahaaga iyo tirada dhibcaha laga filayo heerka fasal ee safka Sannadka Bilowga-Dhamaadka. Qawaaniinta koritaanka ee loo sameeyay Daraasada Caadiga ah ee RIT ayaa ka tarjumeysa aragtida guud ee ah in heerka kobaca tacliimeed uu la xiriiro heerka bilowga ardayga ee cabirka cabirka; sida caadiga ah, ardayda ka bilaabaya heer hoose waxay u muuqdaan inay sii kordhayaan.
Qawaaniinta Kobaca Qaranka
Marka guusha ardayga Minnetonka la barbardhigo heerka guud ee qaranka, ardaydeena waxay kasbadaan in ka badan sannad koritaanka sanad gudihiis. Dhamaadka fasalka 5aad, ardaydu waxay gaarayaan wax ka badan heerka fasalka 11aad. Iyada oo leh aasaas adag, ardayda Minnetonka waxay si wanaagsan isugu diyaariyeen inay iskood ula tartamaan koorsooyinka Meelaynta Sare iyo International Baccalaureate dambe ee dugsiga sare.
Qiimaynta NWEA waa mid gaar ah
Ardaydu waxay imtixaanada ku qaadaan kumbuyuutar. Su'aaluhu waxay si toos ah ula jaanqaadayaan heerka ku habboon ee waxbarashada ilmahaaga, iyadoo lagu saleynayo jawaabihi hore. Asal ahaan, imtixaan kasta waxaa loo habeeyay arday kasta si uu u tilmaamo heerka waxbarid ee ku habboon. Ardayda dhaqan ahaan u arkay qiimeynta la jaangooyay inay tahay mid aad u dhib badan, oo sidaas darteed jahwareer, waxay helayaan isku dheelitirnaan wanaagsan oo su'aalo dhib leh. Ardayda dhaqan ahaan ku manaafacaaday qiimeynta jaangooyooyinka waxay helayaan su'aalo dhib badan. Nidaamkan imtixaankan, ardayda awoodda sare leh waxay ogaadeen in aanu jirin saqaf macmal ah oo lagu tijaabinayo hanashadooda tacliimeed.
Teknolojiyadaani waxay u oggolaaneysaa koritaanka tacliimeed ee ardayga in loo cabbiro si ka sii saxan oo waxtar badan. Qiimayntu way ka gaaban yihiin qiimaynta caadiga ah ee caadiga ah waxayna isticmaalaan waqti yar oo fasal ah iyadoo weli la soo bandhigayo macluumaad faahfaahsan oo sax ah oo ku saabsan awoodda waxbarasho ee ilmahaaga iyo koritaankiisa. Ilmo kasta wuxuu wadar ahaan ku dhowaad saddex saacadood ku qaataa shaybaarka kombiyuutarka dhameystirka qiimeyntan inta lagu jiro daaqadda saddexda toddobaad ah.
Qiimeynta ka dib, waxaad heli doontaa warbixin muujineysa dhibcaha aasaasiga ah ee canuggaaga deyrtaan. Imtixaanada ku xiga (guga iyo deyr kasta), waxaad sidoo kale arki doontaa dhibco koritaan si ay uga caawiso la socoshada haddii ilmahaagu gaadhayo kobaca sannad sannad gudihiis. Warbixin waliba waxay sidoo kale bixisaa dhibco dhibco ah oo laxiriira heerarka heerka fasalka iyo dhibcaha Lexile.
Dhibcaha Lexile wuxuu bixiyaa heer heerar akhris ah
Waad booqan kartaa www.Lexile.com , waxaad geli kartaa aagga Lexile, waxaadna heli kartaa liiska buugaagta, nooc iyo da 'ahaan, ee ku dhex jira heerka aqrinta habboon ee ilmahaaga. Ogeysiis ku socota waalidiinta akhristayaasha xoogga leh: Dhammaan waxyaabaha ku daabacan heerka akhriska cunuggaaga kuma habboonaan heerka qaangaarka ilmahaaga.
Buugaagta ku yaal dhamaadka hoose ee xadka Lexile waxay ku habboon yihiin akhris madax-bannaan waxayna dhisi doonaan ku-habboonaanta akhriska iyo xawaaraha.
Buugaagta ku yaal dhamaadka sare ee xadka Lexile waa la akhrin karaa oo laga wada hadli doonaa adiga iyo ilmahaaga, macalinkooda ama asxaabtooda si loo kala bixiyo xirfadaha akhriska ee ilmahaaga - gaar ahaan meelaha ereyada iyo fahamka.
Waxtarka nidaamka imtixaanka cusub wuxuu sidoo kale siin doonaa natiijooyin deg deg ah barayaasha. Macallimiinta iyo maamuleyaashu waxay ku helaan natiijooyinka imtixaanka maalmo gudahood imtixaanka, marka loo eego bilaha ka dambeeya qiimeynta gobolka.
Waxaan runtii ku faraxsanahay inaan bilowno xilli cusub oo qiimeyn ah oo diiradda saaraya koritaanka shaqsi kasta iyo gaaritaankiisa.
Ku saabsan shirkadda imtixaanka iyo imtixaanka
Ururka Qiimaynta Northwest (NWEA) waa urur aan macaash doon ahayn oo lashaqeeya degmo dugsiyeedyada Mareykanka oo dhan. In ka badan 1,900 degmo dugsiyeed ayaa isticmaala qiimeynta NWEA, oo ay ku jiraan Bloomington, Chaska, Eden Prairie, Edina, Wayzata iyo degmooyin kale oo Minnesota ah.
Iyada oo leh kooxda tixraaca ugu weyn ee qaranka, NWEA waxay soo sheegaysaa dhibco caadi ah oo si caadi ah loo tixraacay. Si kastaba ha noqotee, natiijooyinka NWEA waxay ka gudbeen qiimeynta boqolkiiba boqol ee guusha ardayda ama tilmaamaysa heerka heerka fasalka. NWEA sidoo kale waxay cabbiri doontaa kobaca tacliimeed ee waqtiga ka dambeeya, kana madaxbanaan heerka fasalka ama da'da.
Barayaashu waxay isticmaalaan buundooyinka imtixaanka NWEA si ay u aqoonsadaan xirfadaha iyo fikradaha ay ardaydu ogyihiin iyo waxa ay u baahan yihiin inay ku bartaan xiga si ay usii koraan. Macluumaadka saxda ah, waqtiga ku habboon ee baahida ardayga gaarka ah, barayaashu waxay bartilmaameedsan karaan waxbaridda si arday walba uu wax u barto una korayo.
Qiimaynta NWEA waxay la jaanqaadaysaa Heerarka Minnesota waxaana badanaa loo adeegsadaa inay muujiso u diyaargarowga qiimaynta gobolka. Degmooyinka badankood waxay maareeyaan NWEA laba jeer sanadkii si ay ugu oggolaadaan barayaasha inay kormeeraan horumarka ardayda. Natiijooyinka imtixaanka ardayga waa la ilaaliyaa imtixaanka ka dib imtixaanka, sidaa darteed macallimiinta iyo waalidiintu waxay kormeeri karaan koritaanka ardayda shakhsi ahaaneed sannadba sannadka ka dambeeya.
Qiyaasaha NWEA ee 2015 Xogta Caadiga ah ee Horumarka Tacliinta
Su'aalaha Xisaabta NWEA Tusaale
NWEA Su'aalaha Akhrinta Tusaalaha ah
Agaasimaha Qiimeynta Degmada
Waxa kale oo aad la xiriiri kartaa maamulaha dugsigaaga.
Baaritaanka iyo Qiimeynta /